नवीनतामा रमाउने रहर - Sainokhabar
होमपेज / देश / नवीनतामा रमाउने रहर
नवीनतामा रमाउने रहर
मङ्गलबार, चैत २६, २०७५ , साइनो खबर
रिट्ठेका बा रिट्ठेले बिदेशबाट ल्याईदिएको सिलौटे मोवाईल र छालाको ज्याकेट पाएर मक्ख परेका छन् । उता जुरेली छोरीले अस्ट्रेलियाबाट ल्याईदिएको लुगाफाटो गरगहना र सिलौटे मोवाईल पाएर दङ्ग परेका छन् । त्यस माथि बाईफाई जोड्न पठाईदिएको पैसाले वाईफाई जोडेर अस्ट्रेलियामा रहेकी छोरीसँग अनुहार हेरी हेरी गफ गर्न पाउदाँ जुरेलीमा खुसीको सिमा छैन । सिरान घरेका जोईपोइ नै नातिको न्वारनमा नेदरल्याण्ड जाने रे । कुलो पारीका कुल प्रसादको छोराले त बेलायती नागरिक सरहको कानुनी मान्यता पाएकोमा कुल प्रसाद गजक्क परेका छन् । मुहानघरे लाहुरे सुब्बा एक्स आर्मी हङ्कङतिरै सेटल हुने भए रे । एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सबैतिर नेपालीहरु कुनै नकुनै रुपमा बसेका छन् । म लगभग १५÷१६ वर्षको हुँदा कोही कामदारको रुपमा विदेश गएको सुन्दा अचम्म मान्थे । अहिले विश्वव्यापी भए नेपालीहरु । अन्तराष्ट्रियस्तरका ब्रान्डेड सामानको उपभोग गर्न थाले नेपालीहरुले । हिडठुल, खानपिन, सिंगारपेटारमा पनि अन्तराष्ट्रिय शैली अपनाउन थाले, नेपालीहरुले । लेखेका पनि छोराहरु युरोपमा पढ्छन् रे । उसलाई पनि छोराहरुले नयाँ ढङ्ग । शैलीमा जीवन जीउन सिकाएका छन् र सोही अनुसारका उपकरणहरु ल्याईदिएका छन् । लिखेका जोईपोई पोहोर साल युरोप घुमेर आएदेखि परिवर्तन भएका छन् । मरे पछिको स्वर्गमा विश्वास गर्ने लिखेका जोईपोई जीउदै वास्तविक स्वर्ग देखेर आएको कुरा गर्छन् ।
यी त भए नेपालका नवीनताहरु विकसित मुलुकहरुमा अझ के के भएको होला ? चिनले कृतिम चन्द्रमा बनाएर आकाशमा राख्ने ठाउँ (स्पेस) खोज्दै छ रे । हामी सानो छदा अत्यन्त अविकसित मुलुक भनेर चिनिएको अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाले विकासमा फड्को मारेको सुन्न पाईन्छ । मरुभुमिले उजाड खाडी मुलुकहरु मरुधानले गुल्जार बनेका छन् र खनिज तेल बेचेर धनी भएका छन् । एसियाली मुलुकहरु थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाले पनि द्रुत गति बिकास गरेको कुरा जानकाहरु बताउँछन् । बिकसित मुलुकहरु समुन्दूमा बाटो बनाउन थालेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट देख्न, सुन्न र पढ्न पाईन्छ । अझ विश्वका वैज्ञानिकहरुको जमघट हुने संस्था नासाका वैज्ञनिकहरुले कस्ता कस्ता कुराको आविस्कार गरे होलान ?
माथि उल्लेखित नवीनताहरु देख्दा, सुन्दा, पढ्दा र अनुभव गर्दा लाग्छ मेरो ५० वर्षे उमेरलाई पनि नवीकरण गरेर १६ वर्षे बनाई अझ लामो समय यस नवीन संस्थालाई नियाल्न पाए हुन्थ्यो । वैज्ञानिकहरुले यस्तो प्रविधिको चाहि विकास गरेका छैनन होला । अनि संसारको नवीनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्नका लागि विना खर्च चरा जस्तो उडेर घुम्न सक्ने उपकरण माथिको शरिरमा जडान गरि दिए यी मानिसहरु कति घुम्थे होला ।
अन्त्यमा के लाग्छ भने अझ धेरै नवीनताहरु देख्न, सुन्न, अनुभव गर्न र उपभोग गर्न पाइयोस । सबै वैज्ञानिकहरु नवीन आविस्कारमा, डिजाईहरु डिजाईनमा व्यापारीहरु व्यापारमा, शिक्षकहरु शिक्षण पेसामा, कर्मचारीहरु प्रशासक, नेताहरु राजनीतिमा, नीति निर्माताहरु नीति निर्माणम, विद्यार्थीहरु शिकाईमा, बटुवाहरु हिडाईमा, कलाकारहरु कलामा, कवि साहित्यकारहरु रचनामा नवीनतामा बाँच्न सिकाउन् । दीर्घायु बनेर संसारलाई लामो समय अनुभव र उपभोग गर्न पाउन् ।
–उर्लाबारी ३ मोरङ